Naaton’ny fanjakana ao Angola ny fandaharan’ny TV Record · Global Voices teny Malagasy
Nihatra tamin'ny 21 Aprily ny fandrarana
MpanoratraGlobal Voices Lusofonia
Voadika ny 18 Mey 2021 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Swahili, Português
Pikantsarin'ny fahitalavim-panjakana ao Angola / YouTube – 19 Aprily 2021
Nomen'ny governemanta Angoley baiko ny TV Record Africa hampiato ny asany ao amin'ny firenena ny 19 Aprily, noho ny tsy fanarahan-dalàna hoy izy ireo.
Nifanojo tamin'ny fotoana nampafana ny tsikera tao amin'ny firenena momba ny fisian'ny Église Universelle du Royaume de Dieu, tompon'ny TV Record any Brezila ny fanapahan-kevitry ny governemanta Angoley.
Nanomboka tamin'ny taona 2017, niampanga ny fiangonana Breziliana ho nanao kolikoly, nampijaly ary nanavakava-bolonkoditra ny pastera Angoley.
Tamin'ny volana Jolay 2020, nisy fanangonan-tsonia navoaka hanoherana ny herisetra ataon'ireo pasitera sy eveka Breziliana ao Angola, ary efa nahatrara 100 000 sahady ny isan'ny sonia.
1 herinandro izayFifidianana